Zandary nanana olana Notifiriny ny raibeny avy eo izy nitifi-tena
Zandary iray kilasy faharoa miasa ao Mandrosonoro no nitifitra nahafaty ny raibeny, avy eo namono tena tamin'ny basim-panjakàna,
tamin'ny fandalovany tao Ambalavao raha namita iraka tany Ambositra, ny alin'ny 16 hifoha 17 febroary 2020, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena. Nidina any an-toerana tsy misy hatakandro ny komandin'ny vondrontobim-paritry ny Zandarimaria Ambatofinandrahana hanao fanadihadiana lalina ahafantarana ny tena antony. Rehefa vita ny iraka ampanaovina dia aterina any amin'ny tobim-basy (magasin armement) ny fitaovam-piadiana nampiasaina mba hisorohana ny loza toy izao. Hentitra ny fanaovana fanadihadiana mikasika ny fitondran-tenan'ireo izay hiditra ho zandary sy ny mikasika ny fianakaviany izay nahalehibe azy, hoy ny eo anivon’ny fiadidian’ny zandarimariam-pirenena. Na izany aza dia nitondra teny fampiononana eo anatrehan’ny fahoriana ny fiadidian’ny zandarimaria. Tato ho ato, dia tena nirarakopana ny fihoaram-pefy nataon’ny zandary sasany, izay saika fampiasana basy tamin’ny fomba tsy ara-dalàna na herisetra sy fanararaotam-pahefana. Teo ihany koa ny firaisana tsikombakomba tamin’ny olon-dratsy na manao asa ratsy. Miisa 82 no naiditra am-ponja tamin’ny taon-dasa, ary 6 na nihoatra kelin’izay hatramin’ny fiadohan’ity taona ity.